Ny periostitis amin'ny valanorano ambany sy ambony (serous, purulent) - ny antony, ny soritr'aretina, ny aretina, ny fitsaboana
Ny periostite amin'ny nify - ny antony sy ny fitsaboana aretina mampidi-doza
Ny periostitis amin'ny nify dia manjò ny periosteum (periosteum) ny valanorano, izay sarimihetsiketsika mifamatotra amin'ny taolana izay mandrakotra ny taolana avy any ambony. Ny fiantraikan'ny vokatry ny periosteal dia mampiseho ny toetrany amin'ny toetr'andro ary mitaky fitsaboana amin'ny fotoana mety.
Periodite - ny antony
Ny pustule dia mitana andraikitra manan-danja, miasa ho loharanon'ny fananganana ny taolana vaovao, manome sakafo amin'ny taolana noho ny fantson-dra mandalo ary mampifandray ny taolana amin'ny rafitra hafa (hozatra, ligaments). Matetika, ny areti-mifindra amin'ny alàlan'ny periosteal dia mivoatra any amin'ny faritra ivelany na ao anatiny ao amin'ny periosteum, aorian'izay dia mety hivezivezy any amin'ny taolana taolana ny valanaretina ambany na ambony, izay raharaha lehibe kokoa.
Ny periostitis dia miteraka:
Ny lozenan'ny nify, ny loto sy ny dentin, dia tsy mahazo fitsaboana ara-potoana;
pulpitis (fanasitranana ny neroma-trondro ao anaty nify);
parodontitis - ny fanasitranana ny teboka mampifandray eo anelanelan'ny taolana sy ny simenitra ny fototeny nify;
parandontitis - ny fizotry ny fifindran'ny aretina ao amin'ny parodontal ny manodidina ny nify ary mitazona izany amin'ny alveolus;
fahasimbana maro samihafa izay misy fiantraikany amin'ny epithelium ao amin'ny lava-pofona (fanesorana nify, valanoranon'ny valanorano, fiantraikany amin'ny takolaka na kakazo, injections);
Ny otrikaretina amin'ny toerana samihafa ao amin'ny vatana dia miditra ao amin'ny tady periosteal amin'ny alalan'ny ra na ny lalànan'ny lympha (tonsillitis, sinusitis , tuberculosis);
fipoahana goavam-be momba ny nify hendry (retina nify).
Matetika no voan'ny aretin'ny periostitis ny vatany ambony, ary amin'ny fampiroboroboana ny fatran'ny aretin-tratra amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia mikroflora mikirakira, anisan'izany ny streptococci, staphylococci, bakteria hitrefaktiv, gram-negatif ary ny tsorakazo Gram. Mihombo haingana ny aretina, miaraka amin'ny soritr'aretina voatonona.
Ny endriny malemy, izay mitranga amin'ny tranga tsy fahita, dia antsoina hoe malemy. Ny fitenenana miverimberina amin'ny endrika mitaiza dia ny periostitis amin'ny valanorano ambany. Ny fampandrosoana ny patolojia dia maharitra hatramin'ny enim-bolana ka hatramin'ny taona maromaro, miaraka amina soritra mahatsiravina, mitombo tsikelikely amin'ny fisehoan-javatra misimisy kokoa. Ny fianarana toy izany dia azo asongadina amin'ny olona manana fitondran-tena immunodecifique, aorian'ny dingana tsy misy fanafarana.
Ny fikolokoloana amin'ny bakteria ao amin'ny periosteum dia manomboka avy hatrany rehefa misy aretina na ratra mampatahotra. Amin'io tranga io dia misy fiantraikany ratsy amin'ny zavamananaina rehetra ny micro microorganisms, ary mety hiparitaka any amin'ny faritra hafa amin'ny rà mandriaka ny aretina. Rehefa mivoatra ny periostitis amin'ny valanorano, dia hita ireo soritr'aretina mandritra ny fanadinana tsotra. Matetika ny fisehoan-javatra manaraka no voarakitra:
ny moka sy ny fivoahana amin'ny tavy ao amin'ilay faritra voakasika, ka manjary tsikelikely ny ampahany ao amin'ny takolaka, molotra, mina (arakaraka ny toerana misy ny fifantohana);
fahatsapana mampihetsi-po izay mitombo rehefa manokatra ny vavany, misakafo, miresaka, manaikitra ny nify ary voapotsitra izany, manome ny sofina, ny maso, ny tempoly (afaka mitabataba, manosika, manaparitaka);
ny famolavolan-dalan-dàlana, ivelany misolo tena ny fandrobana milina;
ny fihenan'ny vavony
ny fahasimban'ny fahasalamana ankapobeny, ny fahalemena, ny tazo;
Ny fitomboan'ny kanseran'ny vozon-tranonjaza .
Ny isaky ny odontogenic acute odontogenic dia matetika no mizara roa dingana (endrika):
Amin'io endritsoratra io dia mety hanomboka ny periostitis mahery amin'ny valanaretina na ny fihanaky ny fizotran'ny aretina. Amin'io tranga io, ny fanabeazana sy ny fifindrana eo amin'ny periosteum sy ny taolan'ny exudate sery dia voamarika, fitoviana mitovy amin'ny serrônina. Aorian'ny fotoana fohy dia mitroka ny periosteum, manasitrana ny taolam-paty miaraka amin'ny fluid sero. Ity dingana ity dia afaka maharitra hatramin'ny telo andro, miaraka amin'ny marika famantarana famantarana.
Ny antiostitis mahery vaika mahery vaika, izay mifandray amin'ny fivoarana amin'ny fifindran'ny bakteria pyogenic. Ny Pus dia miteraka ny periosteum, mahatonga azy io hanalavitra ny taolany, izay vokatry ny fihenan'ny taolam-boalohany dia mety hitranga ny necrosis. Ankoatr'izany, ny dingana dia mety miteraka ny fihoaram-pefy avy amin'ny fistula na ny fielezan'ny pus amin'ny tavy matavy amin'ny fampandrosoana phlegmon. Miaraka amin'ny famotsorana tsy misy hatak'andro, dia mihena ny soritr'aretina ary tonga ny fanampiana.
Periostite - Diagnostika
Misy toe-javatra izay tsy ampy ny fanaraha-maso ny maso amin'ny fitsaboana, ny fametrahana ny mari-pahaizana ary ny famerana ny lesoka. Ny sary iray feno dia azo avy amin'ny fanaovana rajako, ny periostitis izay aseho toy ny fihenan'ny periosteum. Io fitiliana io dia tokony atao alohan'ny roa herinandro aorian'ny fampiroboroboana ny areti-maso, satria mialoha ny vanim-potoana dia tsy hita maso ny fizotry ny aretina. Ankoatra izany, azo atao ny mandinika ny fitsaboana amin'ny ra, izay, amin'ny pôrnôlôgy, dia hampiseho tarika fotsy fotony lehibe ary avo lenta ny ESR.
Fitsaboana ny periostitis amin'ny nify
Ireo fomba fampiharana ny periostitis dia miankina amin'ny antony mahatonga ny aretina, ny dingana ary ny fahasarotan'ny dingana. Rehefa avy nanombana ny toetoetran'ilay tohotra voan'ny aretina izy, dia manapa-kevitra ny dokotera na hanajanona izany amin'ny fitsaboana azy. Rehefa azo atao ny manavotra ny nify dia matetika izy io dia mitaky ny fanadiovana ny lavaka ao amin'ny lakandrano avy amin'ny pulpan'ny voina, ny fanasitranana, ny fanesorana ny nify ary ny famehezana.
Raha voamarika amin'ny endriny serio ny periostitis amin'ny nify, matetika dia tsy ilaina ny fidirana amin'ny serivisy. Indraindray ny dokotera dia afaka mihevitra fa ilaina ny manapaka ny periosteum mba hanamaivana ny fihenjanana amin'ny teboka eo amin'ny sehatry ny areti-maso. Amin'ny dingana manify, ny fomba fitsaboana dia ampahany tsy maintsy atao amin'ny fitsaboana sarotra. Ao amin'ny anesthesia eo an-toerana na ankapobeny, ny fitsaboana, ny fitsaboana ary ny fitsaboana ny antiseptika dia atao, miaraka amin'ny mucosa sy ny periosteum miparitaka manerana ny fifindrana. Ho an'ny firoboroboan'ny fivoahana amin'ny fomba manala baraka, ny fampiroboroboana ny fefiloha mandritra ny 1-2 andro.
Ankoatra izany, ny periostitis amin'ny nify dia raisina amin'ireto fomba manaraka ireto:
mandray antibiotika ara-teknika;
Mampihorohoro ny famoretana mangatsiaka - hanamaivana ny fanaintainana sy ny fanaintainana;
vinaingitra vinaingitra amin'ny vahaolana antiseptika na fampidiran-kitrokely miaraka amin'ny toetra antibakterika (Furacilin, Chlorhexidine , Miramistin, romaine romaine, calendula, sage);
miteraka fanafody (Nurofen, Lornoxicam, Paracetamol, Nimesil, Diclofenac);
fomba fitsaboana ara-batana mba hampihena ny famongorana ny fanasitranana sy ny fanavaozana ny vatan'ny olona (laser therapy, ultrasound na ny fiovan'ny toetr'andro, sns.);
fitandremana ny fihinanana sakafo tsy miova, manome ny tsy fananana sakafo hena, sarotra, mamy, mando ary sira.
Antibiotika amin'ny periostitis
Ny periostite amin'ny toeram-pitsaboana - iray amin'ny diagnosy, izay amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny fanendrena antibiotika amin'ny fitantanana ny orana. Ny fampiasana fanafody lehibe dia ampiasaina, afaka manangon-karena amin'ny habetsaky ny valanoranony, ary mahakasika ny mikroflora mikorontana. Ny fitsaboana ny periostitis amin'ny valanorano dia azo atao miaraka amin'ny fanampian'ny iray amin'ireto fanafody manaraka ireto:
Metronidazole miaraka amin'ny Clindamycin sy ny hafa.
Periostite - volam-bahoaka
Raha misy fanontaniana mikasika ny fomba fitsaboana periostitis dia tsy afaka miantehitra amin'ny fomba fanafody sy ny fomba amam-panao ianao, raha tsy izany dia mety hitarika ny fiakaran'ny aretina, ny fivoaran'ny fahasarotana. Ny fomba fanao ao an-tokantrano dia tsy azo ampiasaina afa-tsy ho fanampiana amin'ny fitsaboana fototra omen'ny dokotera, ary mila alalana avy aminy. Tsara homarihina fa raha sendra misy periostitis dia tsy mifanaraka ny fiakaran'ny faritra voakasika. Ny fitsaboana ao an-tokantrano tsara indrindra dia ny fanalefahana amin'ny fikarakarana fiterana. Ohatra, afaka manomana fanafody mahomby ianao.
sage - 1 latabatra. sotro;
bao oak - tabilao 1. sotro;
Ny kofehin'i St. John - 1 latabatra. lovia kely.
Mampifandray ireo zavamaniry, mifangaro.
Raiso 2 teatran-tsoavaly ny famoriam-bola, alatsaho rano litatra.
Mianjera amin'ny bata iray rano mandritra ny antsasak'adiny, mafana, mangatsiatsiaka ho 25-27 ° C.
Ampiharo amin'ny 40-60 minitra.
Ny fitsaboana ny periostitis taorian'ny fitrandrahana nify
Raha toa ny fitsaboana nentim-paharazana dia tsy manome ny valim-panantenana, ny odontogenic periostitis dia raisina amin'ny fomba fiasa hanesorana ny nify. Ny fitsaboana hafa dia voafaritry ny dokotera, mifototra amin'ny toe-javatra. Matetika no ampiasaina ireo fomba ireo, izay aseho aorian'ny famenoana ny nify. Ny fampandrosoana dia tokony andrasana aorian'ny 2-3 andro, famerenana tanteraka - mandritra ny 7-10 andro.
Varimbazaha ho an'ny nify
Peeling amin'ny tarehy any an-trano - fomba fitsaboana
Ny stomatitis ao am-bava
Peeling PRX-T33 - fomba fanao vaovao izay tsy mitaky fanavaozana
TTG - ny fitsipika amin'ny vehivavy, miankina amin'ny vanim-potoana, ny andro sy ny fotoana
Andro Eritreretin'ny Holocaust
Daub alohan'ny volana
I Lauren Hatton, 73 taona, dia lasa toetra tranainy indrindra ao amin'ny gazety Vogue
Winter Jackets Columbia Omni-Heat
Clicks amin'ny boloky
Karazana fifandirana ao amin'ny fikambanana
Vehivavy Aries - mifanaraka amin'ny famantarana hafa
Ahoana ny fialana voly?